Fitaovan'ny Gemstone. Ahoana no tsy hanjavonana amin'ny fividianana vato?
Ireo mpivarotra vatosoa sy firavaka dia mampiasa teknika maro handresena lahatra anao hividy. Tsy maninona na mahantra ianao na milionera. Hain'izy ireo ny mahita fomba haharesy lahatra anao. Mijery anao izy ireo mandra-pahitany ny kintana manomboka mamirapiratra eo imasonao. Mopnotis anao izy ireo, hahatonga anao handany ny vola anananao ao am-paosinao.
Ireo mpihira Gemstone dia tsy mpahay siansa
Ny 99.99% ny mpivarotra vato dia tsy mpikaroka. Izy ireo dia mpivarotra, nampiofana izy ireo mba hividy vato mandritra ny ora vitsivitsy na andro vitsivitsy, amin'ny tsara indrindra. Tsy manana namana any ianao. Izy ireo dia mijery anao ho toy ny fomba hanangonam-bola.
Ny fomba tsara indrindra hividianana vato na firavaka dia ny tsy fihainoana ny tohan-kevitr'ireo mpivarotra fa miankina amin'ny zavatra fantatrao sy izay hitanao fotsiny. Ireo mpivarotra dia tsy hitsahatra hikasika anao ara-pientanam-po, hampihetsika anao. Noho izany, tohero, henoy ny hevitrao lojika.
Mahaolana amin'ny fivarotana madinika
Andao atomboka amin'ny fisolokiana any amin'ny magazay kely, toeram-pitrandrahana na amin'ny faritra famokarana vato.
Raha misy mpivarotra manome vola ho an'ny vatosoa na vato iray, ary manolotra avy hatrany ny vidiny amin'ny antsasany dia tokony hihazakazaka lavitra ianao.
Manontania tena hoe: raha mankany amin'ny trano fisakafoanana ianao, mividy trano iray, akoho amidy na rongony misy ganagam-boankazo, ianao dia omena rindrambaiko 50% raha tsy misy fampirimana fampiroboroboana? Ny valiny dia tsia. Tsy misy dikany izany, tsy mampaninona na marina na diso ny vato, dia hesorina ianao.
Tondro vato, vato hafanana, maniry amin'ny vato hafa, sns.
Izay rehetra tsy misy dikany. Raha ny marina, ny firafitry ny akora simika amin'ny vato synthetic dia mitovy amin'ny vato voajanahary. Ho toy ny vato tena izy ho an'ireo fitsapana rehetra hodiaviny izany.
Ampitahao ny vato kanto ho an'ny fitaratra
Mba hamitahana anao, ny mpivarotra dia mampitaha vato syntetika amin'ny vera iray. andao hiresaka momba ny famoahana an'i Ruby. Ruby dia vato mena avy amin'ny fianakaviana corundum. Ny fifangaroana simika dia oksida aluminium matetika. Ruby sentetika dia vita amin'ny firafitry ny simika mitovy amin'ny tena izy. Mitovy ny fomba fandraisan'izy ireo ny fitsapana rehetra izay haseho anao. Ny mpivarotra dia hampitaha vato 2: robina sentetika ary satroka vera mena. Manazava fa vato roa samy hafa izy ireo, io vera io dia vato sandoka ary io robina sentetika io dia tena vato. Fa lainga izany. Samy sandoka ireo vato roa ireo ary tsy misy lanjany, na.
Mahatsiaro any amin'ny trano fivarotana tsara tarehy
Ankehitriny, ohatra ny fivarotana tsara tarehy, trano fidiovana, trano fivarotana iray na seranam-piaramanidina iray.
Ny mpivarotra dia tsy hanandrana handresy lahatra anao fa marina ny vato amin'ny fanandramana vato na ny fihenam-bidy ara-barotra. Ny teknika ampiasaina amin'io tranga io dia tena manjavozavo kokoa: fisehoan-javatra sy singa amin'ny fiteny.
Iza no mety hiahiahy fa mivarotra zava-tsarobidy ny fivarotana iray mitovitovy endrika, feno mpividy akanjo tsara tarehy sy mahay mandanjalanja?
Anarana amin'ny teny latina
Manaova fanandramana sasany amin'ny fametrahana fanontaniana. Raha mihaino amim-pitandremana ny valiny ianao, dia ho takatrao fa mahatsiaro tsara ireo fehezanteny ireo. Tahaka ny valin'ny fitsangatsanganana amin'ny fiaramanidina, na koa miantso ireo mpitsangatsangana foibe.
Question 1: Mividy vato voajanahary ve ianao?
Valiny: Madam, Ity dia tena kristaly.
Ny teny hoe "kristaly" amin'ny firavaka dia manondro fitaovana mangarahara. Tsy midika izany fa voajanahary na sentetika ny vato.
Question 2: Volamena ve ny metaly?
Valiny: Ramatoa, metaly sarobidy izy io.
Tsy “eny” na “tsia” no nolazainy. Tsy novaliany ny fanontanianao.
Ny teny hoe "metaly sarobidy" koa dia tsy misy dikany ara-dalàna. Raha ny marina, mivarotra firavaka vita amin'ny firaka vy tsy misy volafotsy, volamena na vy sarobidy ity fivarotana ity.
Araka ny hitanao dia tsy misy fomba mahagaga hisorohana ny fihomehezana. Ny fahatsapanao mahazatra dia ny fiarovanao tsara indrindra.